သီရိ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးtaunggyi,ShanMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ သီရိ's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
သူရိယ leftacomment for သီရိ"ဟုတ်ကဲ့လာလည်ပါတယ်နော် သူ=တော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံနေသူဟာ။ ရိ=ဝေအတွေးတစ်ပါးမသွားဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်။ ယ=မာမင်နဲစစ်ခင်းဖိုးအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီသားပုဂ်ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ ခင်လိုပါနော် တီလေးလိုခေါ်ပါရစေ ပျော်ရွှင်ပါစေ လုပ်ငန်းမှန်သမျှအောင်မြေပါစေ"Nov 18, 2011စန္ဒာ leftacomment for သီရိ"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မိမိမေလ်းထဲမှ…"Nov 17, 2011နီစံ (အနီ) leftacomment for သီရိ"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မိမိမေလ်းထဲမှ…"Nov 17, 2011aungaung leftacomment for သီရိ"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
( ဤနေရာကိုကလစ်၍…"Nov 17, 2011သီရိ ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Nov 17, 2011 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
12:24am အချိန်November 18, 2011, တွင်သူရိယ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့လာလည်ပါတယ်နော် သူ=တော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံနေသူဟာ။ ရိ=ဝေအတွေးတစ်ပါးမသွားဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်။ ယ=မာမင်နဲစစ်ခင်းဖိုးအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီသားပုဂ်ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ ခင်လိုပါနော် တီလေးလိုခေါ်ပါရစေ ပျော်ရွှင်ပါစေ လုပ်ငန်းမှန်သမျှအောင်မြေပါစေ 12:32pm အချိန်November 17, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မိမိမေလ်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို<="" a="">
မေတ္တာပို့ရန်နေရာ၊ပရဟိတအဖွဲ့နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားတောင်းဆိုခြင်း တို့ကိုလည်းလေ့လာဖတ်ရှုရင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေများ စိတ်အေးချမ်းသာပြီး စိတ္တသုခ ကာယသုခနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 6:29am အချိန်November 17, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
တို့ကိုလည်းလေ့လာဖတ်ရှုရင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေများ စိတ်အေးချမ်းသာပြီး စိတ္တသုခ ကာယသုခနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 2:21am အချိန်November 17, 2011, တွင်aungaung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
( ပရဟိတအဖွဲ့ )နှင့်( ဗုဒ္ဓဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ )ကိုလေ့လာဖတ်ရှုရင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေများ စိတ်အေးချမ်းသာပြီး စိတ္တသုခ ကာယသုခနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့
ရန်မျိုးနိုင် ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
panbaduackt ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ko thein htay
16. သီလဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
17. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒ်မင် ကိုညီညီတင်နှင့် အက်ဒ်မင် ဆရာတော်အရှင်ဝဏ္ဏတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
18. ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တို့ မလုပ်မနေရသော ကိစ္စများ
19. “တရားထိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါအေးချမ်းစေပါတယ်”
20. မလေးရှားရောက် မြန်မာများသို့ ဆုတောင်းမေတ္တာလွှာ
Top News · Everything ကိုညီညီတင် သည် ဘလော့တင်သွားပါသည်။"မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသည့် " နေရေး၊သေရေး အဖြေပေးဖို့ " တရားတော်""ဣနြ္ဒိယ သံဝရသီလ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း"10 minutes agopadout liked မူကြိုဆရာ's blog post 'နီးနီးဝေးဝေး ရန်သူ'19 minutes agoashin indobhhasa, အိမ့်သူ, anatta and 1 more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺36 minutes agopadout liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ဆုတ်ခေတ်'50 minutes agopadout liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ငါ့မှာ ရန်သူမရှိပါဘူး'1 hour agopadout liked Ashin Nandavamsa's blog post 'သက်ပျင်းချ အတွေးတစ်စ နောက်ကွယ်မှာ'1 hour agoလှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for အိမ့်သူ"မိတ်ဆွေကို...ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် ဓမ္မမိသားစု မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏...။"1 hour agoမူကြိုဆရာ သည် ဘလော့တင်သွားပါသည်။ငါ့မှာ ရန်သူမရှိပါဘူးဆုတ်ခေတ်ဆုတ်ခေတ်4 more…1 hour agoAshin Nandavamsa သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။သက်ပျင်းချ အတွေးတစ်စ နောက်ကွယ်မှာသက်ပျင်းချ အတွေးတစ်စ နောက်ကွယ်မှာ....ခုတစ်လော စာရေးသူရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘာရယ်လို့ တိတိပပ ဝေခွဲမရသော…See More1 hour ago 1
thein wai သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေကြသူများ။See More1 hour ago 0
မတင်တင်မိုး liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"ဣနြ္ဒိယ သံဝရသီလ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း"'2 hours agoမတင်တင်မိုး liked ကောင်းမြတ်မင်း's blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ'2 hours ago More... RSS